Cà de Angelo-Igumbi 2 - I-Airbnb
Cà de Angelo-Igumbi 2
Igumbi lakho lokulala e indlu sinombuki zindwendwe onguGian Paolo
UGian Paolo yi-Superhost
Igumbi eliphindwe kabini elibekwe kwindawo esembindini nethe cwaka, umganyana welitye ukusuka elwandle kwindlwana yosapho lwam eManarola ilali yaseCinque Terre. Igumbi lenziwe ngesango lokungena, igumbi eliphindwe kabini, indawo yewadilophu, i-ante-igumbi lokuhlambela kunye negumbi lokuhlambela.
Igumbi nalo linendawo yangaphandle ekhoyo.
Indawo yam ikwimizuzu nje emibini ukusuka elwandle. Igumbi linebhedi ekhululekileyo ephindwe kabini, i-wifi, igumbi lokuhlambela labucala elineshawa ehonjiswe kakuhle kunye negumbi lokuhlambela langaphambili. Egumbini uya kufumana ifriji, iketile, isomisi seenwele, ikofu, iti kunye necamomile ukulungiselela isidlo sakusasa sakho.
Ulonwabo luyafumaneka. Kubonelelwe ngamashiti, iitawuli kunye neengubo.
4.88 · Izimvo eziyi-162
IManarola yilali eseCinque Terre, ilali yonke liziko ledolophu elidala. Kukho izindlu ezineempawu ezimibalabala ezincanyiswa lilanga phezu kolwandle, izitepsi zamatye eziqhelekileyo, izitrato ezimxinwa ze-ligurian kunye nendlela ye-alley; konke oku kufutshane nolwandle.
Umbuki zindwendwe ngu- Gian Paolo